Terms Ary Condition - Maniry teo amin'ny lalao
Terms Ary Condition – Maniry teo amin'ny lalao
Terms Ary Condition
Zavatra tsy fisondrotana ihany no misy ny kaonty manankery mpihazona antitra 18 na mihoatra.
This bonus will be active each weekend in April 7th – 9faha, 14faha – 16faha, 21St – 23RD, 28faha – 30faha Aprily 2017 BST.
BST no mitovy amin'ny ACST -9.30hrs, ITY -1hr, PTZ + 8hrs
Hametraka farafahakeliny ny £ 10 mba hahazo 100% deposit bonus match up to £100
Bonus nahazoan-dalana dia ho atao ny kaonty ao anatin'ny 3 andro fiasana ny faran'ny ny fampiroboroboana.
Standard wagering zavatra takian'ny 30x ny tombony vola ampiharina eo anoloan'ny tombony na mifanaraka winnings azo alaina.
Ny fiovam-po ambony indrindra vola avy amin'ny vola tombony ho Tsikirity amin'ny 4X ny tombony nahazo vola. Bonus vola niova fo ho azy indray mandeha wagering tanteraka.
Rehefa nisaotra ny tombony mbola manan-kery ho an'ny 28 andro. Tokony tsy vita ny wagering fepetra takiana ao amin'io vanim-potoana, tombony vola sisa dia hesorina avy amin'ny kaonty.
Bonus nahazoan-dalana dia afa-miala amin'izany, ary tsy afaka ho ampiasaina eo amin'ny lalao manaraka: Dracula, Guns 'N’ Roses, Jimi Hendrix, Divine Fortune, Ilay tsy hita maso Man, Kleopatra MegaJackpot, Storm Siberia Megajackpot, Megajackpots Isle O'Plenty, Wolf Run Megajackpot, Star fanilo Megajackpot, Gong Xi Fa Cai, More Monkeys hizaha kintana Jackpot, Génie Jackpots, Winstar, Justice League, Batman, Superman, ny Flash, Green fanala, Ny hariva amin'ny Holly Madison, Psycho, James Dean, Ary ny kisoa Le Magicien, Thunderstruck II, Avalon, Kodiarana Fortune tao amin'ny Tour, Champion Raceways, Slot O Gold, Super spinner, Super Diamond Deluxe
Mpilalao ireo ary tsaroako fa ny iray ihany dia afaka ny ho mpanao tombony na oviana na indray mandeha. Masìna ianao, mankanesa any “piraofilina” fizarana ny hamerina hijery ny tombony mbola miandry manontolo filaharana.
Fepetra – Talata Match